एपीएफ टोलीद्वारा चाँदीसहित पक्राउपर्सा, पर्सा जिल्लाको विरगंज महानगरपालिका १६ स्थित भन्सार मुलगेटबाट भाद्र १६ गते एपीएफ टोलीले एक के.जी. तीन सय ३२ ग्राम चाँदीसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा पर्सा जिल्लाको विरगंज महानगरपालिका १२ रामगढवा बस्ने १८ वर्षीय विकास श्राव छन । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नम्बर १४ गुल्म हेक्वा पर्साबाट खटिएको एपीएफ टोलीले निजलाई उक्त चाँदी सहित पक्राउ गरेको हो । ना.१३ प ५५२४ नम्वरको मोटरसाईकलमा भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेका निज श्रावलाई जाँच गर्दा उनको साथमा उक्त चाँदी फेला परेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको हो । एपीएफ टोलीले त्यसबेला सो मोटरसाईकल समेत बरामद गरेको छ । पक्राउ परेका श्रावलाई बरामद चाँदी तथा मोटरसाईकल सहित आवश्यक कारवाहीको लागि विरगंज भन्सार कार्यालय पर्सामा बुझाईएको छ । बरामद चाँदी तथा मोटरसाईकलको भन्सार दाखिला मुल्य करिव २ लाख ८ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
एपीएफ टोलीद्वारा चाँदीसहित पक्राउ
पर्सा, पर्सा जिल्लाको विरगंज महानगरपालिका १६ स्थित भन्सार मुलगेटबाट भाद्र १६ गते एपीएफ टोलीले एक के.जी. तीन सय ३२ ग्राम चाँदीसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा पर्सा जिल्लाको विरगंज महानगरपालिका १२ रामगढवा बस्ने १८ वर्षीय विकास श्राव छन । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नम्बर १४ गुल्म हेक्वा पर्साबाट खटिएको एपीएफ टोलीले निजलाई उक्त चाँदी सहित पक्राउ गरेको हो । ना.१३ प ५५२४ नम्वरको मोटरसाईकलमा भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेका निज श्रावलाई जाँच गर्दा उनको साथमा उक्त चाँदी फेला परेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको हो । एपीएफ टोलीले त्यसबेला सो मोटरसाईकल समेत बरामद गरेको छ । पक्राउ परेका श्रावलाई बरामद चाँदी तथा मोटरसाईकल सहित आवश्यक कारवाहीको लागि विरगंज भन्सार कार्यालय पर्सामा बुझाईएको छ । बरामद चाँदी तथा मोटरसाईकलको भन्सार दाखिला मुल्य करिव २ लाख ८ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।